Semalt को साथ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु लाई कसरी प्रदर्शन गर्ने?
१. Semalt बाट "प्रतिस्पर्धी" के हो?
२. किन प्रतियोगीहरूको अनलाइन अभ्यासहरू बारे थप जान्नुहोस्?
Live. प्रत्यक्ष उदाहरणको साथ Semalt बाट "प्रतिस्पर्धीहरू" बुझ्दै
This. यस प्रतिस्पर्धी विश्लेषणले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ?
एउटा कारक जसले उद्यमको सफलतालाई निर्धारण गर्दछ त्यो हो कि कति राम्रो छ त्यसले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई भन्दा कसरी राम्रो गर्छ। आज, यस्तो देखिन्छ कि टेक्नोलोजीको विकासले तपाइँका प्रतिस्पर्धाहरूलाई धेरै सजिलो बनाएको छ।
यो सजिलो देखिन्छ, तर यो छैन। यद्यपि टेक्नोलोजिकल विकासले धेरै चीजहरूलाई सरल बनाएको छ, तपाईलाई अझै पनि विशेषज्ञ र अझ राम्रो रणनीतिको आवश्यक छ प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि बढ्नको लागि, विशेष गरी डिजिटल संसारमा।
ठिक छ, तपाईं क्रान्तिकारी डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरूका लागि आभारी हुन सक्नुहुन्छ Semalt, जसले तपाईंको प्रतिस्पर्धीलाई बुझ्नको लागि धेरै निःशुल्क उपकरणहरू प्रदान गर्दै छ र उनीहरूको अघि अघि बढ्न रणनीति बनाउँछ।
आज, यो लेखले तपाईंलाई Semalt को सहयोगमा कसरी तपाईंको अनलाइन प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन गर्ने सिक्न मद्दत गर्न गइरहेको छ प्रतिस्पर्धी।
Semalt बाट "प्रतिस्पर्धी" के हो?
यदि तपाइँ अनुमान लगाई रहनु भएको छ कि "प्रतियोगीहरू" Semalt बाट उत्पादन वा सेवा हो भने, तपाईं सहि हुनुहुन्छ। यो एक राम्रो उपकरण हो तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू बुझ्ने र तपाईलाई गुगल कार्बनिक खोज परिणामहरूमा उनीहरूको प्रदर्शनमा रणनीति बनाउन सहयोग गर्ने।
यस उपकरणले तपाइँलाई सबै वेबसाइटहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन Google SERPs (खोज इञ्जिन नतीजा पृष्ठहरू) मा तपाइँको वेबसाइट द्वारा प्रयोग गरिएको उच्च-रैंकिंग किवर्डहरूको लागि उच्च श्रेणी दिन्छ। यसले तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरू बीच तपाइँको वेबसाइटको स्थिति पहिचान गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
Semalt बाट धेरै अन्य अफरहरु जस्तै यो उपकरण प्रयोग गर्न को लागी पनि नि: शुल्क छ र सँधै सबैको लागि पहुँच योग्य। यस उपयोगी उपकरणसँग सुरू गर्न सरल चरणहरू हेर्नुहोस्:
चरण 1: तपाईंको वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् semalt.net ठेगाना बारमा। यसले तपाईंलाई Semalt को गृहपृष्ठमा लैजान्छ व्यापार को लागी शक्तिशाली SEO उपकरणहरु।
चरण २: तपाईंको कर्सरलाई बाँया फलकमा सार्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् प्रतिस्पर्धी।
चरण:: जब प्रतिस्पर्धी उपकरण खुल्छ, तपाईंको वेबसाइटको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् (डोमेन) र चयन गर्नुहोस् खोज प्रणाली जहाँ तपाईंको वेबसाइट पहिले नै कम्तिमा एक कुञ्जी शब्दको लागि दर्ता हुन्छ।
पूर्वनिर्धारित खोज इञ्जिन हो google.com (सबै) - अन्तर्राष्ट्रिय, तर तपाईं यसलाई आफ्नो लक्ष्य क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
चरण:: थिच्नुस निवेदन गर्नु, र तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु को अगाडि प्राप्त गर्न को लागी आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।
किन प्रतियोगीहरूको अनलाइन अभ्यासहरू बारे थप जान्नुहोस्?
तपाईं मध्ये कोही अझै अझै सोचिरहेछन् प्रतिस्पर्धीहरु को बारे मा अधिक जान्नु पर्ने के हो। ठिक छ, हामी डिजिटल युगमा बाँचिरहेका छौं जहाँ कडा अनलाइन उपस्थिति सफलताको बराबर छ।
यहाँ केहि कारणहरू छन् जुन तपाईले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु को अनलाइन अभ्यासहरु बारे अधिक जान्नु पर्छ:
अधिकांश ग्राहकहरूले उत्पादनहरू (वा सेवाहरू) र Google मा सान्दर्भिक जानकारीको लागि खरीद निर्णय लिनु अघि खोजी गर्दछन्। यदि तपाइँका प्रतिस्पर्धीको उत्पादन/सेवा Google कार्बनिक खोज परिणामहरूमा उच्च स्थानमा छन् भने, किन तिनीहरू उत्तम अनलाइन छन् भनेर जान्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूका अनलाइन अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्नाले उनीहरूले सही के गरिरहेछन् र कहाँ उनीहरू गल्ती गर्दैछन् भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ। तपाइँले के गर्ने र के नगर्ने भनेर एक विचार प्राप्त गर्नुहुनेछ।
प्रतिस्पर्धीहरूको अनलाइन गतिविधिहरूको मूल्या By्कन गरेर, तपाइँले ग्राहक अन्तर्दृष्टिको बारेमा सिक्ने मौका पाउनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको प्रस्तावहरु लाई सुधार गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक लाभहरु पाउन यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्यक्ष उदाहरणको साथ Semalt बाट "प्रतिस्पर्धीहरू" बुझ्दै
यस उपकरणको राम्रोसँग बुझ्नको लागि, हामीले यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको साथ हेर्नुपर्दछ। हामी मूल्या to्कन गर्न जाँदैछौं डोमेन हो semalt.com। हामीले चयन गर्ने खोजी ईन्जिन हो - google.com (सबै) - अन्तर्राष्ट्रिय।
यहाँ तपाइँको स्क्रिनमा कस्तो देखिनेछ भनेर यहाँ छ:
रिपोर्टमा के समावेश छ?
रिपोर्टले तपाईंलाई तीन ()) उपयोगी अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ:
१. साझेदारी गरिएको कीवर्डहरू
२. साझा कीवर्ड डाईनामिक्स
Google. गुगल शीर्षमा प्रतिस्पर्धीहरू
तिनीहरूलाई एक एक गरी बुझौं:
यो खण्डले तपाइँको वेबसाइटको खोजशब्दहरूको कुल संख्या र Google SERP (खोजी इञ्जिन परिणाम पृष्ठ) मा तपाइँको शीर्ष compet१ प्रतिस्पर्धी रैंकको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
विश्लेषण वर्तमान मिति मा TOP 1-100 स्थिति मा साझा कुञ्जी शव्दहरूको संख्यामा आधारित छ। यसले तपाइँसँग पछी हप्तामा साझा गरिएको कुञ्जी शव्दहरू प्रदर्शन गर्ने फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
को लागी semalt.com, यो यस्तो देखिनेछ:
यो खण्डले के भन्छ खोज्नुहोस्:
यस खण्डले करीव छ ()) ब्लकहरू समावेश गर्दछ semalt.com, र प्रत्येक ब्लकले TOP मा साझा कुञ्जी शव्दहरूको कुल संख्या समावेश गर्दछ र गत हप्ताको सन्दर्भमा उनीहरूमा वृद्धि वा घट्ने गर्दछ। यसले निम्न कुरा प्रकट गर्दछ:
आज, २,,०72२ साझा कुञ्जी शब्दहरू शीर्ष १ स्थितिमा छन्। पछिल्लो हप्ताको तुलनामा, यो संख्या १,, .633 ले घट्यो।
आज, ,०,39 8 shared साझा कुञ्जी शब्दहरू शीर्ष positions स्थानमा छन्। पछिल्लो हप्ताको तुलनामा, यो संख्या, 56,११० ले घट्यो।
आज, १,71,,540० साझा कुञ्जी शब्दहरू शीर्ष १० स्थानमा छन्। पछिल्लो हप्ताको तुलनामा, यो संख्या १,।,, 29 २ by ले घटेको छ।
आज, ,,82२,5२। साझा कुञ्जी शब्दहरू शीर्ष १०० स्थानमा छन्। पछिल्लो हप्ताको तुलनामा, यो संख्या १ 13,56,6०० ले घट्यो।
तपाईले प्रत्येक खण्डको तल दायाँ पट्टि हरियो वा रातो माथि/तल तिर एर्रो देख्नुहुनेछ। साझा कुञ्जी शव्दहरूको प्रदर्शनलाई स indicate्केत गर्ने यो दृश्य तरीका हो।
यस सेक्शनले सेयर गरिएको कीवर्ड्सको संख्यामा परिवर्तन देखाउँदै चार्ट समावेश गर्दछ जसका लागि चयनित कुञ्जी शब्दहरू Google TOP मा क्रमबद्ध छन्।
को लागी semalt.com, यस्तो देखिन्छ:
यस चार्टले के भन्छ खोज्नुहोस्:
यस चार्टमा पाँच लाइनहरू तपाईंको पाँच प्रतिस्पर्धी हुन्। जब तपाईं यी लाइनहरूमा कर्सरलाई होभर गर्नुहुन्छ, तोकिएको मितिमा साझा कुञ्जी शव्दहरू देखा पर्दछ। को लागी साझा कीवर्ड जानकारी semalt.com मा, 25 जनवरी 2021, थियो:
U२, 34 keywords34 कुञ्जी निकासuu.com TOP100 मा थिए
Facebook.com बाट, 37,794keywords कीवर्डहरू शीर्ष १०० मा थिए
रिसर्चगेटनेटबाट, 37,२। Keywords कीवर्डहरू शीर्ष १०० मा थिए
Youtube.com बाट, 35,5१ keywords कीवर्डहरू शीर्ष १०० मा थिए
Twitter.com बाट २,,8433 कीवर्डहरू शीर्ष १०० मा थिए
पूर्वनिर्धारित द्वारा, सूचीबाट पहिलो पाँच प्रतियोगीहरू (अर्को खण्डमा) चयन गरियो, तर तपाईं कुनै पनि पाँच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
यो खण्डले तपाईंलाई शीर्ष १, शीर्ष 3, शीर्ष १०, शीर्ष ,०, शीर्ष 50०, र शीर्ष १०० स्थानहरूमा साझा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या फेला पार्न मद्दत गर्दछ। तपाईं माथिल्लो बायाँ तर्फ अवस्थित ड्रपडाउन मेनूबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो खण्ड ट्याबुलर फारममा छ र साझा किवर्डहरूको संख्याको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ जुन तपाईंको र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूले गुगल टप्पिको मा दर्जा दिन्छ। यसले तपाइँलाई साझा कीवर्डको संख्यामा फरक ट्र्याक गर्न पनि मद्दत गर्दछ, अघिल्लो मितिको तुलनामा।
को लागी semalt.com, यो खण्ड यस्तो देखिन्छ:
यस टेबलले के भन्छ खोज्नुहोस्:
यस तालिकाले semalt.com को 51१ प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूको सूची र साझेदारी गरिएको कुञ्जी शव्दहरूको संख्या समावेश गर्दछ जुन उनीहरूले Google TOP १०० मा रेन्क गर्छन्। यस सेक्सनका केही प्राथमिक हाइलाइटहरू यी हुन्:
तपाईं सूचीबाट तपाईंको पाँच ()) प्रतियोगी वेबसाईटहरू मध्ये कुनै पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र अघिल्लो सेक्सन (सेयरवर्ड किवर्ड डाइनामिक्स) मा साझा कीवर्डहरूको प्रदर्शन हेर्न सक्नुहुनेछ।
यसले तपाइँलाई तपाइँको आवश्यकता अनुसार मिति दायरा चयन गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ। तपाईं समान वा फरक महिनाको कुनै दुई हप्ता तुलना गर्न सक्नुहुन्छ।
पूरा विकल्प वा यसको अंश द्वारा प्रतिस्पर्धी वेबसाइट सूची फिल्टर गर्न एक विकल्प पनि छ। तपाईं अगाडि गुगल खोजी परिणाममा स्थिति चयन गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे TOP 1, TOP 3, TOP 10, र यस्तै।
यदि तपाईं खोजी आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने, यसले कीवर्डहरू प्रदर्शन गर्दछ जुन वेबसाइट गुगल टॉप १०० मा रेटेड छ।
तालिकामा अन्तिम दुई स्तम्भहरू (मिति दायराहरूको) सहयोगी खोजशब्दहरूको संख्यामा भिन्नता फेला पार्न मद्दत गर्दछ तपाईंको प्रतिस्पर्धीको वेबसाइटले गुगलको जैविक खोजी परिणामहरूमा वेबसाइटको लागि दर्ता गर्दछ।
तपाईं पूर्ण रिपोर्ट वा प्रतिस्पर्धीको सूची पीडीएफ वा CSV ढाँचामा डाउनलोड गर्न विकल्प पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं यसलाई गुगल ड्राईवमा निर्यात गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यहाँ यसको लागि विकल्प पनि छ।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरु को बारे मा यो सबै जानकारी गुगल कार्बनिक खोज परिणामहरु मा तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरु लाई राम्रो प्रदर्शन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरूले यो जानकारी प्रदान गर्न मोटा शुल्क लिन्छन्, तर Semalt यो सबै सित्तैमा प्रदान गर्दछ।
यस प्रतियोगी विश्लेषणबाट कसले फाइदा लिन सक्छ?
विज्ञहरूले सुझाव दिन्छ कि तपाइँ जहिले पनि तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको प्रत्येक कार्यको बारे सचेत हुनुपर्दछ। भौतिक संसारमा, तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूको प्रत्येक चरणको बारेमा थाहा पाउनु असम्भव छ। जहाँसम्म, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको रणनीति/दृष्टिकोण पहिचान अनलाइन संसारमा धेरै सम्भव छ, बाट उपकरणहरू धन्यवाद Semalt र अन्य।
यस प्रतिस्पर्धी विश्लेषणले सबैलाई कसले फाइदा लिन सक्दछ हेरौं
व्यक्ति जो खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि नयाँ छन् उनीहरूको प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूमा साझा कुञ्जी शब्दहरूको प्रदर्शनको मूल्यांकन गरेर धेरै प्राप्त गर्छन्। यसले उनीहरूलाई एसईओ रणनीति विकास गर्न लैजान्छ।
व्यक्ति जो जान्न चाहन्छन् कि कसरी नवीनतम एसईओ प्रवृत्तिहरू र गुगलको एल्गोरिदममा परिवर्तनहरू उनीहरूको प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूलाई असर गर्दैछ। यस रिपोर्टले यो पनि खुलासा गर्दछ कि कुन साझा कुञ्जी शब्दहरूले उनीहरूलाई राम्रो क्रम निर्धारण गर्न मद्दत गरिरहेका छन्।
मानिस जो आफ्नो वेबसाइट को लागी एक उच्च रैंकिंग प्राप्त गर्दैनन् उनीहरू के प्रतिस्पर्धी खोज परिणामहरु उत्कृष्ट बनाउन के अभिनव चीजहरु जान्छन्।
मानिस जो उनीहरूको हालको दर्जा को बारे मा चिन्तित छन्, चाहे उच्च हो वा कम, गुगल खोज परिणामहरूमा। यो विश्लेषणले उनीहरूको प्रतियोगीहरूको कीवर्डहरू र SEO गतिविधिहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ।
प्रतिस्पर्धी Semalt बाट एक उपकरण हो जुन किवर्डहरू र तपाइँको प्रतिस्पर्धी गुगल खोज परिणामहरूमा उच्च श्रेणीकरण को लागी प्रयोग गर्ने बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं प्रतिस्पर्धी विश्लेषण बुझ्न र त्यस अनुसार रणनीति बनाउन मा एक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने, यो उपकरण ले तपाइँलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरु लाई पछाडि मद्दत गर्न सक्छ।
जहाँसम्म, तपाई Semalt मा एसईओ विशेषज्ञहरु को संपर्क मा मिल्यो भने गुगल जैविक खोज परिणाम पृष्ठहरु मा प्रतिस्पर्धी सुपर द्रुत हुन सक्छ।